Dowladda Somaliya oo u dabaaldegtay 55 guurada ka soo wareegatay xiriirka kala dhaxeeya Shiinaha – STAR FM SOMALIA
Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa waxay sheegtay in ay u dabaaldegayso xiriirka wanaagsan ee kala dhaxeeya dalweynaha Shiinaha, oo jirsaday muddo 55 sano ah.
War Saxaafadeed ay soo saartay Dowladda, ayaa waxaa lagu sheegay inay ku faanayso xiriirka mudada tobonaanka sano ihi jirsaday, eek ala dhaxeeya Shiinaha.
“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku faanaysaa inay u dabaal degto 55-sano guurada ka soo wareegatay Xiriirka Soomaaliya iyo China oo ah mid laba geesood wadaag ah oo miradhal leh.” Ayaa lagu yiri War Saxaafadeedka.
Markale, ayaa waxa lagu yiri “Soomaaliya iyo China waxaa ay wadaagaan xiriir taariikheed qoto dheer iyo aragti mideysa ka guul gaaridda horumarka iyo barwaaqadda oo ku dhisan xushmad wadaag iyo iskaashi hiigsi leh.”
“Xukuumadda Soomaaliya iyo Shacabkeeda waxaa farxad u ah taageerada joogtada ah ee China , iyo dadaalada aan dib ugu dhiseyno dalkeena. Shacabka iyo Xukuumadda Jamhuuriyadda Shacbiga China waxa ay cadeeyeen ka qeybgalkooda tooska ah iyo taageerada kala duwan ee ay u fidinayaan Soomaaliya”
“Maalintani taariikhda leh , Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay la dabaal degeysaa China , hore-usocod horumar leh, waxaanu raadineynaa wax wadaagid si loo gaaro horumar joogta ah iyo iskaashi dhaqaale oo guul leh.”